Xaalada Gaalkacyo oo Degen, Xiisado Cabsi leh oo taagan iyo Ganacsiga oo Xiran. – SBC
Xaalada Gaalkacyo oo Degen, Xiisado Cabsi leh oo taagan iyo Ganacsiga oo Xiran.
Xaalada Magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug ayaa saaka degen sida ay ku soo waramayaan wariye yaasha SBC International ee halkaasi ku sugan.
Inkasto ay si xowli ah u taagantahay xiisada u dhexeysa labada dhinac ee labadii maalin ee la soo dhaafay halkaasi ku dagaalamayay ayaa hadana aan jirn wax dagaal ah oo soconaya,
Xaalada ayaa ah mid aan la isku haleyn Karin maadaama ay is hor fadhiyaan dhinacayda Dagaalamay saacadba saacadeedna la filan karo dagaal markale qarxa.
Dagaalkii maalinnimadii shalay ayaa qaboobay xili qoraxdhicii shalay waxaana ka dhashay khasaar aad u tiro badan oo dhimasho, dhaawac iyo mid maaliyadeedba leh.
Maamulka Puntland oo ka hadlay shalay dagaalka galay maalintii labaad ayaa sheegay in ay kula jiraan xoogag ay ku tilmaameen argagixiso, halka maamulka Galmudug ee isagu ka arimiya dhanka koonfureed ee Gaalkacyose uu sheegay in dagaalku uu u dhexeeyo laba beel ee aanay sax aheyn sheegashada Puntland.
Dhinaca kale Dowlada Puntland ayaa u muuqata mid aan joojin doonin howlgalada dagaal ee ay kula jiraan sida la rumeysanyahay maleeshiyo beeleed ku sugan Gaalkacyo, balse waxaa arinkaasi qeylo dhaan ka gudbinaya sidii loo joojin lahaa dagalada dhamaan wax garadka iyo odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed Gaar ahaan kuwo gobolka.
Marka laga soo tago xaalada oo iminka degen waxaa weli hakad ku jira dhaq dhaqaaqii ganacsi iyo gaadiid ee Magaaladaasi iyadoo aan jirin wax ganacsi ah oo ka jira suuqyada waaweyn ee magaalada Gaalkacyo.